Apple inotangisa yechitatu betas yeIOS 14.7, watchOS 7.6 uye macOS 11.5 | IPhone nhau
Kunyangwe Apple yakanyudzwa munguva yekugadzirisa kwayo matsva mashandiro yakapihwa kuWWDC, zvakakoshawo kuramba uchichengeta izvozvi zvinyorwa uye shanduro dzezvigadzirwa zvako. Muchokwadi, Apple iri kushanda pane inotevera vhezheni yesoftware iripo parizvino: iOS 14, watchOS 7 uye macOS 11. Isu tave nevekuvandudza betas kwevhiki dzinoverengeka uye maminetsi mashoma apfuura yechitatu betas yeIOS 14.7, watchOS 7.6 uye macOS 11.5 dzakaburitswa.
Isu tinoenderera mberi neiyo betas yeIOS 14.7, watchOS 7.6 uye macOS 11.5
Ichokwadi ndechekuti nhau dzatakawana mune yekutanga betas yevagadziri veiyi mitsva vhezheni haina kukwana zvachose. Muchokwadi, muIOS 14.7 chete nhau dzine chekuita neImba app dzave kuwanikwa. Mariri, tinogona gadzira nguva yeiyo HomePod mukati meiyo iPadOS inoshanda sisitimu pachayo.
Kuti ugone kuisa aya mabheta, chishandiso chako chinofanirwa kuve neyakagadziridzwa purogiramu yakaiswa nayo yekuwana iyi mhando yezvinyorwa. Unogona kugadzirisa iyo beta yeIOS 14.7 yawanga uine kana kuenda kubva kuIOS 14.6 kuenda kune nyowani beta yeIOS 14.7. Iyo michina inowonekera kune macOS 11.5 uye watchOS 7.6.
Hazvizivikanwe kuti ndeapi marongero eApple zvine chekuita neshanduro idzi nyowani yesoftware. Nekudaro, zviri pachena kuti ivo havadi kuvhura chingave chekupedzisira chikuru kugadzirisa kune iPadOS uye iOS 14, watchOS 7 uye macOS 11 vasina chokwadi chekuti nhau dzakabatanidzwa dzakagadzirira. Sezvo kunofanirwa kuve kugadzikana kweshanduro idzi dzese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Apple inoburitsa yechitatu betas yeIOS 14.7, watchOS 7.6 uye macOS 11.5
Nyowani nyowani dzinonongedza kune nyowani Apple Tarisa SE 2 uye nyowani Yekutsva modhi